Google SERP CTR site n'ọkwá
Nchịkọta # 1 na nsonaazụ Google na 18.2% CTR
Kedu ihe a na-ahụ maka pịa-site na ọnụego (CTR) maka nsonaazụ US maka ọnọdụ # 1-10 na Nchọpụta Nchọpụta Nchọgharị (SERP)? Slingshot SEO emeela ihe nyocha di omimi nke emere data site na iji ihe karịrị mmadụ 170,000 bịara nleta onye ọrụ gafere 324 mụ họọrọ Keywords n'elu a 6-ọnwa oge. Dabere na data ahụ, Slingshot SEO hụrụ usoro na-esonụ maka Kpọtụrụ CTR.
M na-ahụkarị ụlọ ọrụ SEO na-akpọsa nsonaazụ 'peeji 1' maka ndị ahịa ha. Ọ bụrụ n’ịtụle ihe ọmụmụ a, nke ahụ dị ka ikwe ndị ahịa ha nkwa 1% pịa-ọnụego. Nke ahụ ọ masịrị gị n'ezie? Ọ na-egosi na itinye ego na ụlọ ọrụ nwere ike ibuga gị na ọnọdụ 1 bara uru itinye ego na ntinye ego mgbe ọnụọgụ ọchụchọ dị iji kwado azụmahịa gị. Nke a bụ ihe ịtụnanya ọmụmụ.
Otu nchoputa nke ihe omumu ha bu na onu ogugu ha di ala karia ihe omumu ndi gara aga. Ọ bụ ezie na ha na-eche maka nke a na dataset, m ga-agbakwunye na m kwenyere na mpịakọta ọchụchọ isiokwu Google mere ka ọ bụrụ ezighi ezi. Otu ihe atụ bụ okwu: onye weghachite m. Gugul na-enye nchoputa ihe nchoputa 1900 mana Webmasters na-egosi ihe ngosi kwa ọnwa nke 1,300. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche dị n'etiti nọmba abụọ ahụ. Ọ na - eweta ọtụtụ ọgba aghara na ndị ahịa anyị mgbe ha nọ n'ọkwa dị elu mana ha anaghị enweta okporo ụzọ ahụ Google na - atụ aro ka enwere!
Download Akwụkwọ edemede.
Vidio: Emailvision Technology na Uto
Anụrụ m ọtụtụ ndị mmadụ na google na-egosi nsonaazụ na-ezighi ezi mana ọ nweghị onye n'ime anyị anaghị anwa anwa na ihe kpatara nke a ji eme na ihe anyị chere dị mma ma ọ bụ na-ezighi ezi. Na ezigbo google na-egosi nsonaazụ na-ezighi ezi ma ọ bụ na anyị ezighi ezi. N'ihi na asọmpi maka ị nweta ọkwa dị elu na okporo ụzọ anyị nwere oke ogo na oke. Ya mere, nke a na-eme n'ihi ya ma ọ bụ google ezighi ezi. Ugbu a, anyị ga-achọta ezigbo ihe kpatara nke a.
Rajesh Kumar kwuru
Mee 26, 2012 na 5: 31 AM
na ngụkọta, nke a bụ naanị 52.34%, ebe ezumike ndị ọzọ agaala? Adreesị ma ọ bụ ????
Mee 27, 2012 na 8: 43 PM
@ twitter-90853096: disqus Anyị n'ezie dere a ọhụrụ post nke nwere ike inye ụfọdụ nghọta… anyị nhazi ọkwa na-egosi na imirikiti nleta anyị sitere na engines ọchụchọ sitere na ntinye SERP dị omimi karịa ndị a. Ọ bụ ezie na ogo # 1 dị oke mma, ọ ga - adị mma ma ọ bụrụ na ọ bara oke uru maka ngwaahịa na ọrụ ị na - akwalite.